Galaxy Tab S7 iyo S7 +: qeexitaannada iyo qiimaha | Androidsis
Ballanqaadka cusub ee Samsung ee adduunka kiniinnada Android waxaa lagu magacaabaa Galaxy Tab S7 iyo S7 +, laba kiniin oo leh shaashado shaashado kala duwan leh iyo muuqaalada in yar oo ka hinaaso iPad Pro, Jilaaga ugu weyn adduunka ee suuqan, waxyaabaha sida ay yihiin, iyo Cesar, waa maxay Cesar. In kasta oo Samsung ay aad ugu dhowaatay iPad Pro, haddana ma ahayn illaa iyo markii la bilaabay jiilkan cusub ee ay ugu dambeyntii guuleysatay.
Galaxy Tab S7 ma aha oo kaliya inuu isku daro S-Pen (qalinka Apple ee si gooni ah loo iibiyo) yareynta daahitaanka ilaa 9 ms (sida iPad Pro) laakiin sidoo kale kumbuyuutarka (si gooni ah ayaa loo iibiyaa), wuxuu isku daraa trackpad, taas oo na siinaysa kala duwanaansho illaa iyo hadda aanan ka heli karin kiniin kale oo ay maamusho Android, laakiin, mar kale, iPad Pro muddo bilo ah oo keliya.
Maaddaama aan had iyo jeer faallo ka bixiyo markaan ka hadlayo Samsung, adigu lacag kama bixinaysid wax soo saar, waxaad bixineysaa nidaamka deegaanka ee alaabta (sida Apple oo kale). Heshiisyadii kala duwanaa ee Samsung ay la gashay Microsoft, ayaa kaniiniyadan ka dhigaya ikhtiyaarka ugu fiican ee suuqa ku dhex jira Windows 10.
1 Tilmaamaha Galaxy Tab S7 iyo Galaxy Tab S7 +
2 Farqiga u dhexeeya labada nooc
3 Faa'iidooyin isku mid ah
4 Isku xirnaanta Wireless
5 Galaxy Tab S7 iyo S7 + qiimaha, helitaanka iyo midabada
Tilmaamaha Galaxy Tab S7 iyo Galaxy Tab S7 +
253.8 165.3 6.3 mm
Peso Gram 498 Gram 757
Screen 11-inji 2560 × 1500 LTPS TFT @ 120Hz 12.4 inji 2800 × 1752 Super AMOLED @ 120Hz
Nidaamka hawlgalka Android 10 Android 10
Gacaliye 7nm 64-bit Octa-Core * 3.0 GHz (Max) + 2.4 GHz + 1.8 GHz processor 7nm 64-bit Octa-Core * 3.0 GHz (Max) + 2.4 GHz + 1.8 GHz processor
Xusuusta iyo Kaydinta 6GB + 128GB / 8GB + 256GB - microSD ilaa 1TB 6GB + 128GB / 8GB + 256GB - microSD ilaa 1TB
Kaamirada gadaal 13 MP weyn + 5 mp xagal ballaadhan + flash 13 MP weyn + 5 mp xagal ballaadhan + flash
Kaamirada hore 8 MP 8 MP
Cod Ku-hadlayaasha Bawdada leh codka ee AKG - Dolby Atmos Ku-hadlayaasha Bawdada leh codka ee AKG - Dolby Atmos
Xiriirinta Nooca C USB 3.2 Gen 1 - Wi-Fi 6 Nooca C USB 3.2 Gen 1 - Wi-Fi 6
Sensors Accelerometer - Compass - Gyroscope - Sensor Light - Sensor Hall Effect Accelerometer - Compass - Gyroscope - Sensor Light - Sensor Hall Effect
Batariga 8.000 mAh Waxay taageertaa lacag degdeg ah 45W 10.090 mAh Waxay taageertaa lacag degdeg ah 45W
Aqoonsiga Biometric Faraha akhristaha badhanka dhinaca Shaashadda shaashadda akhristaha
Gargaarka S-Pen (lagu daray) - Kiiska Buugga - Kiiska Keyboard S-Pen (lagu daray) - Kiiska Buugga - Kiiska Keyboard
Noocyada ay soo saartay soo saaraha
Farqiga u dhexeeya labada nooc
Jiilkan cusub wuxuu u yimaadaa suuqa si uu u daboolo baahiyaha kuwa waxay qaateen kiniin ahaan aaladda ay u shaqeeyaan. Qaabka 11-inji ah, Galaxy Tab S7 wuxuu isku daraa shaashadda LTPS LCD, halka walaalkiis ka weyn, Galaxy Tab S7 +, shaashadiisu gaarto 12.4 inji oo isku xirta teknolojiyadda Super AMOLED.
Dabcan, adoo fulinaya Galaxy Tab S7 + cabir shaashad weyn, baytariga qaabkani waa ka weyn yahay, oo ka socota 8.000 mAh oo aan ka heli karno Galaxy Tab S7 illaa 10.090 mAh ee S7 +. Iyada oo leh cabbirka baaxadda weyn ee batteriga, shirkadda Kuuriya ayaa hirgelisay a 45W nidaamka lacag bixinta degdegga ah, taas oo noo ogolaaneysa inaan si weyn u yareyno waqtiga xamuulka ee labada nooc.
Farqiga ugu dambeeya ee u dhexeeya labada qalab waxaa laga helaa amniga biometric-ka. Dhanka kale isagu Galaxy Tab S7 waxay kudareysaa dareeraha faraha ee badhanka awoodda, Qaabka ugu sareeya wuxuu ku dhexgalaa shaashadda hoose. Farqiga u dhexeeya culeyska, cabirka awgeed waa iska cadahay, in kastoo aan aad u sareeyn, maadaama kaliya 77 garaam lagu qaado nooca aasaasiga ah.
Hal dhinac oo si gaar ah u garaacaya Galaxy S7 + waa dhumucdeeda oo yaraatay, taas oo cabirkeedu yahay 5,7 mm oo keliya, oo sidaas ku noqday kiniinkii ugu khafiifsanaa suuqa. Tab S7 wuxuu dhererkiisu yahay 6,3 mm. Waxay u egtahay in nooca loo yaqaan 'Plus' loo kala bixiyay si uu ugu habboonaado isla tiknoolijiyada meel yar.
Faa'iidooyin isku mid ah
Labada Galaxy Tab S7 iyo Galaxy Tab S7 + labadaba waxaa ku shaqeeya 8-core, 84-bit, 7-nanometer processor waxaana lagu heli karaa noocyo kala duwan 6 GB oo RAM ah iyo 128 GB iyo 8 GB oo RAM ah iyo 256 GB oo keyd ah. Labada noocba waxay leeyihiin booska microSD si loo balaariyo goobta keydinta ilaa 1 TB.
Haddana AKG wuxuu saxeexaa dhawaaqa ay bixiyeen labada nooc iyada oo loo marayo afarta ku hadla (2 dhinac kasta) si loo bixiyo dhawaaqa hareeraha ah oo sidoo kale la jaan qaadi kara Dolby Atmos. Marka laga hadlayo dekedda lacag-bixinta, waxaan ka helnaa dekedda USB-C, laakiin ma leh deked madaxa lagu dhejiyo.
Haddii aan ka hadalno kamaradda, Samsung, sida Apple, waxay rabtaa dadka isticmaala kuma xirna taleefannadooda casriga ah oo keliya inay sawirro ka qaadaan In kasta oo tayada aan ku heli karno taleefannada casriga ah aynaan ku heli doonin iyada oo kiniin ah, ugu yaraan waxay ku siiyaan si aad u ballaaran. Labada noocba waxay dhexgalaan kamaradda weyn ee 13 MP oo ay weheliso xagal ballaaran oo 5 MP ah. Dhinaca hore, labada noocba waxay dhexgalaan kamarad 8 MP ah.
Ahaanshaha Samsung mid ka mid ah heerka caadiga ah ee tikniyoolajiyadda 5G on casriga ah, kaniiniga ma xaqiijin karo. Samsung waxay soo saari doontaa 3 nooc oo kala duwan:
4G LTE + Wi-Fi isku xirka
5G isku xirnaanta
Ma jiro kiniin maanta, xitaa iPad Pro, wuxuu bixiyaa nooc kasta oo leh xiriir 5G, noqoshada Galaxy Tab S7 iyo S7 + gudaha kaniiniga ugu horeeya ee suuqa ku bixiya.
Galaxy Tab S7 iyo S7 + qiimaha, helitaanka iyo midabada
Ballanqaadka cusub ee Samsung ee suuqa kiniiniga dhammaadka-dhamaadka ah ayaa suuqa soo gali doona 21-ka Ogosto waxayna lahaan doonaan qiimaha soo socda ee euro.
Samsung Galaxy Tab S7 Wifi 6GB iyo 128GB: 699 euros
Samsung Galaxy Tab S7 Wifi 8GB iyo 256GB: 779 euros
Samsung Galaxy Tab S7 4G 6GB iyo 128GB: 799 euros
Samsung Galaxy Tab S7 4G 8GB iyo 256GB: 879 euros
Samsung Galaxy Tab S7 + Wifi 6GB iyo 128GB: 899 euros
Samsung Galaxy Tab S7 + Wifi 8GB iyo 256GB: 979 euros
Samsung Galaxy Tab S7 + 5G 6GB iyo 128GB: 1.099 euros
Samsung Galaxy Tab S7 + 5G 8GB iyo 256GB: 1.179 euros
Marka laga hadlayo midabada, Samsung waxay noo soo bandhigi doontaa moodelladan oo ah saddex midab:
Haddii aan ka hadalno kiiboodhka leh trackpad, tani waxay leedahay qiimo dhan 229,90 euro, qiimo ka badan sidii loo hagaajiyay wax kasta oo ay na siiso haddii aan xisaabta ku darsanno inay tahay mid rasmi ah oo la jaanqaadaysa hawlgalka iyo dheefaha ay noo fidiso Galaxy Tab S7
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Galaxy Tab S7 iyo S7 +: qeexitaannada iyo qiimaha
Sawirka meeleynta Francisco Ruiz Vilchez dijo
Oo euro ah imisa?
Jawaab Francisco Ruiz Vilchez
Ma waxaad raadineysaa afhayeen is haysta oo aad xeebta u aaddid? Ha moogaanin dalabkan Skullcandy
Galaxy Z Fold2: qeexitaannada taleefannada casriga ah ee isku laaban Samsung